AmaZulu nezinyathelo ngeTop 8 | Isolezwe
Izindaba / 17 May 2018, 11:39am / MINENHLE MKHIZE
IMENENJA jikelele yaMaZulu uLunga Sokhela. Isithombe: BACKPAGEPIX
Iqembu ngalinye lithola * -R800 000 ngokuba yingxenye yalo mqhudelwano kanti ompetha bahlomula ngo-R8 million.
“Sizolwa nesinqumo sokukhishwa kwiTop 8. Besingeyona ingxenye yodaba lwe-Ajax Cape Town (noTendai Ndoro). Wonke amaphuzu esiwatholile siwalwele enkundleni. Ngicabanga ukuthi ikhona enye indlela obekungalungiswa ngayo lolu daba ngaphandle kokuthi siphume kwiTop 8. Ithimba lethu labameli lizolubhekisisa kahle udaba,” kusho uDlamini.
Usuthu beluzothola * -R1 million ngokuqeda endaweni yesishiyagalombili kodwa njengamanje seluzothola * -R750 000. Phezu kwalokho luzophuthwa * -R800 000 wokudlala kwiMTN 8. Isiyonke le mali ngu-R1,2 million kanti ukube beluzomangaza abantu lunqobe indebe beluzothola * -R8 million.
ISuperSport ibiqede endaweni ka-13 kwi-log ngamaphuzu angu-36 emidlalweni engu-16. Amatsatsantsa afaka isimangalo ngoFebhuwari 28 ngesikhathi ebhekene ne-Ajax eyabashaya ngo 2-0.